Kedu ihe kacha emebi na smartphones? | Androidsis
Ekwentị anyị aghọọla mgbatị anyị, nke anyị nwere ike iji mee ihe ọ bụla batara anyị n'obi. Mgbe ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ ma ọ bụ mebie ya, echiche nke ikewapụ ya imezi ya na -eme ka anyị na -eche ma ọ bụ nhọrọ ka mma ịzụta nke ọhụrụ. Ọ dabara nke ọma, enwere ngwọta dị mfe.
Ejighị ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala karịa mara ọrụ ọrụ aka ọrụ. Ndị China nọ n'akụkụ ụlọ anyị anaghị ekwe anyị nkwa na anyị nwere ike chọọ, yabụ naanị nhọrọ anyị nwere bụ ịgakwuru ụmụ nwoke si Ụwa ekwentị, ụlọ ọrụ na na -arụzi ekwentị n'ime awa 1 site na ịga ụlọ ahịa, n'ime awa 24 ma ọ bụrụ na ha bulie ya na n'ime awa 48/72 na Spain niile.
1 Ngwa ndị na -agbaji na smartphones ugboro ugboro
1.3 n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
1.5 Isi okwu igwe
1.6 Wet mkpanaka
1.7 Ndị na -ekwu okwu ngwaọrụ
1.8 Anaghị agụ kaadị SIM
1.9 Igwefoto igwefoto
2 Ego ole ka ọ na -eri ịrụzi ekwentị m
Ngwa ndị na -agbaji na smartphones ugboro ugboro
Ihuenyo bụ otu akụkụ kacha dị nro nke smartphones N'agbanyeghị eziokwu na ọgbọ ọhụrụ ọ bụla na -eji nchekwa nchekwa Gorilla Glass kachasị ọhụrụ n'aka, ihe nchekwa echekwara iji kpuchido ihuenyo site na ọkọ, ọ bụghị na ntụpọ ma ọ bụ ọdịda.
Ọzọkwa, ọ bụ akụrụngwa kachasị ọnụ mgbe ị na -arụgharị ekwentị mkpanaka, yabụ na anyị ga -akpachapụ anya mgbe niile ma na ihuenyo site na iji ihe ngebichi yana ichekwa iguzosi ike n'ezi ihe nke ngwaọrụ site na iji mkpuchi.
Mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, ihe na -agbaji abụghị ihuenyo n'onwe ya, mana iko na -echebe ya. Ụdị nrụzi a, n'agbanyeghị na ọ dị oke ọnụ ha dị ọnụ ala karịa dochie ihuenyo niile.
Emebere batrị smartphone ka ọ nwee okirikiri ndụ ihe dị ka afọ 2Agbanyeghị na oge ụfọdụ, batrị nwere ike nwee nkwarụ nrụpụta ma ọ bụ n'ihi ojiji na -adịghị mma (mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ, ujo), ọ nwere ike ịza ma tinye iguzosi ike n'ezi ihe nke onye ọrụ n'ihe egwu, ebe ọ nwere ike mechaa gbawa.
Ọ bụrụ na ekwentị gị akwụsịla chaja, ọ na -eji nwayọ, batrị anaghị adịte aka dị ka mgbe anyị zụtara ya ma ọ bụ na ọ zara aza (azụ nke ngwaọrụ ahụ na -apụ apụ karịa ka ọ na -adị) oge eruola iji dochie ya, ngwa ngwa ọ ka mma.
n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Ọ bụrụ na ekwentị gị anaghị akwụ ụgwọ, enwere nsogbu abụọ nwere ike imetụta ya: batrị anwụọla kpamkpam ma ọ bụ njikọ njikọ chaja akwụsịla ịrụ ọrụ, ọ bụrụhaala na anyị enyochaburu na eriri chaja na -arụ ọrụ nke ọma na ekwentị ndị ọzọ.
Gbanwee ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụ ngwa ngwa, dị ọnụ ala ma dịkwa mfe n'aka aka nri. Maka ntakịrị ego, ị nwere ike weghachite ekwentị gị na ndụ.
Ka afọ na -aga, bọtịnụ anụ ahụ nke ngwaọrụ belatara atọ: bọtịnụ ike na bọtịnụ olu. Ọ bụrụ na ngwaọrụ mkpanaka anata kụrụ n'otu n'ime mpaghara ndị a, bọtịnụ nwere ike kwụsị ịrụ ọrụ ma ọ bụ mee ya n'echeghị eche.
O yikwara ka n'ihi ịuseụbiga mmanya ókè, ndị a akwụsịla ịrụ ọrụ ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ nke ọma. Idozi nsogbu a, dị ka nke ọdụ ụgbọ mmiri na -akwụ ụgwọ, dịtụ nfe, dị ọnụ ala yana ngwa ngwa.
Njikọ ọzọ nke na -akwụsịkarị ịrụ ọrụ bụ njikọ ekweisi. Ịbụ oghere, ụdị unyi ọ bụla nwere ike mechaa banye n'ime ya na oge na -emetụta ọrụ ya.
Ọ bụrụ na ị bu n'obi iji mkpanaka gị na mmiri nnu, ị ga -echeta iji mmiri dị ọcha hichaa ya nke ọma, ebe ọ bụ na mmiri saline dị na mmiri oke osimiri. ọla ndị na -emebi emebi, ọkachasị ndị nọ na mmiri na -emekọ ihe ọnụ dị ka igwe ekweisi.
Agbanyeghị na ọtụtụ ndị nrụpụta na -emesi anyị obi ike na ekwentị ha ha na -eguzogide mmiriA na -efesa ha naanị. Ọ bụrụ na ị na -eji ekwentị gị mgbe niile n'okpuru mmiri, ma ọ bụ n'ime ọdọ mmiri, ma ọ bụ nke ka njọ, n'oké osimiri, ị kwesịrị iburu n'uche mgbe niile iji mmiri dị ọcha hichaa ya tupu ịmechaa na ihicha ya.
N'ụzọ dị otu a, kpochapụ nsị saline niile nwere ike ịdị n'elu na oghere nke ọnụ na nke nwere ike mechaa na -emebi ngwaọrụ n'ime obere oge. Ọ bụrụ na mkpanaka gị nwere mgbape na mmiri abanyela, ọ bụghị ihe niile furu efu, ọ ka nwere ike weghachi ya na osisi vaịn.
Ndị na -ekwu okwu ngwaọrụ
Ọrụ nke mmewere a na -emetụta, n'ọtụtụ oge, na mmiri. Ọ bụrụ na mkpanaka ahụ anọwo mmiri ruo ogologo oge, ọ nwere ike bụrụ akụrụngwa a akwụsịla ịrụ ọrụ ma ọ bụ ka njọ. Ọ dabara nke ọma, ọ ga -ekwe omume dochie ya na -enweghị nnukwu nsogbu.
Anaghị agụ kaadị SIM
Ọ bụrụ na anyị na -agbanwe kaadị SIM mgbe niile dị ka nke na -agbanwe ọwa, ka oge na -aga, mpaghara kọntaktị ndị na -agụ data kaadị nwere ike kwụsị ọrụ ma nye njehie ọgụgụ ma ọ bụ kaadị, na -enweghị usoro.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu tufuo njide SIM nke ekwentị gị, ị kwesịrị ịmara na enwere ike zụta obere ihe a nke smartphone, nke na -ahapụ ya na -abaghị uru ọ bụla, n'adabereghị.
N'ịbụ onye iko na -echebe ya na ịnọ n'ime ekwentị, ọ yighị ka nke ahụ modul igwefoto ọ na -akwụsị itisa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ merụrụ ahụ.
Dochie ma igwefoto igwefoto na iko na -echebe bụ ihe nrụzi ọzọ anyị nwere ike ịme na ekwentị anyị tupu anyị echefu ya kpamkpam.
Ego ole ka ọ na -eri ịrụzi ekwentị m
Ọ bụrụ na anyị nwere ihe ọmụma gbasara elektrọnik na / ma ọ bụ anyị ewere onwe anyị dị ka ndị ọrụ aka, anyị nwere ike ịnwale rụzie anyị site n'inweta akụkụ ndị dị mkpa. Ọ gwụla ma ị maara n'ezie ihe ị na -eme, ọ bụrụ na ịchọghị ka ahapụ gị n'enweghị ekwentị, ọ kacha mma ịga ụlọ ọrụ nwere ọkachamara n'ịrụzi.
Mgbe ị na -atụle ịrụzi mkpanaka anyị, anyị achọghị iju anyị anya. Nke kachasị mma bụ ịga ụlọ ahịa ebe ha na -enyocha ngwaọrụ anyị wee nye anyị mmefu ego mechiri emechi na -egosi ihe niile a ga -edochirịrị ka ngwaọrụ anyị wee dịghachi ndụ.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe doro anyaNa ụlọ ọrụ na -arụzi ngwaọrụ mkpanaka na -enye anyị mmefu ego emechiri emechi bụ nkwa, n'ihi na ọ na -ahụ na ọ bụrụ na ihe ọ bụla mebie n'oge nrụzi, anyị agaghị akwụ ụgwọ maka ya n'onwe anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kedu ihe kacha emebi na smartphones?
Ihe niile ị ga -atụ anya n'aka OnePlus 9T: atụmatụ enwere ike, nkọwapụta, ọnụahịa na ụbọchị mwepụta